Koofiyadaha The Indian Face loogu talo galay dadka bilaashka ah - THE INDIAN FACE
Born to Ultratrail Cadaan / Madow
Born to Ultratrail Cadaan / Madow 40.00 €
Born to Ultratrail Casaan / Madow
Born to Ultratrail Casaan / Madow 23.99 € 40.00 €
Born to Ultratrail Cawlan / Buluug
Born to Ultratrail Cawlan / Buluug 40.00 €
Born to Ultratrail Madoow / Jaale / Jaale
Born to Ultratrail Madoow / Jaale / Jaale 40.00 €
Born to Snowboard Cadaan iyo buluug
Born to Snowboard Cadaan iyo buluug 40.00 €
Born to Snowboard Caddaan / Casaan / Madoow
Born to Snowboard Caddaan / Casaan / Madoow 40.00 €
Born to Snowboard Caddaan / Madoow / Jaale
Born to Snowboard Caddaan / Madoow / Jaale 23.99 € 40.00 €
Born to Snowboard Buluug iyo casaan
Born to Snowboard Buluug iyo casaan 23.99 € 40.00 €
Born to Ski Cadaan / Madow
Born to Ski Cadaan / Madow 40.00 €
Born to Ski Casaan / Madow
Born to Ski Casaan / Madow 40.00 €
Born to Ski Cagaar / bunni
Born to Ski Cagaar / bunni 40.00 €
Born to Ride Cagaar / Buluug
Born to Ride Cagaar / Buluug 40.00 €
Born to Fly Buluug / Madoow
Born to Fly Buluug / Madoow 23.99 € 40.00 €
Born to Fly Black / Gray
Born to Fly Black / Gray 40.00 €
Born to Climb White / Red 40.00 €
Born to Climb Cirro iyo caddaan
Born to Climb Cirro iyo caddaan 40.00 €
Born to Climb Cagaar / Buluug
Born to Climb Cagaar / Buluug 40.00 €
Born to Windsurf Buluug iyo caddaan
Born to Windsurf Buluug iyo caddaan 40.00 €
Born to Windsurf Buluug iyo casaan
Born to Windsurf Buluug iyo casaan 23.99 € 40.00 €
Born to Wakeboard Cirro iyo caddaan
Born to Wakeboard Cirro iyo caddaan 23.99 € 40.00 €
Born to Surf Casaan / Madow
Born to Surf Casaan / Madow 40.00 €
Born to Surf Cawlan / Buluug
Born to Surf Cawlan / Buluug 40.00 €
Born to Surf Buluug / Jaale / Cadaan
Born to Surf Buluug / Jaale / Cadaan 40.00 €
Wuxuu ku dhashay Scuba Dive White / Buluug / Casaan
Wuxuu ku dhashay Scuba Dive White / Buluug / Casaan 23.99 € 40.00 €
Wuxuu ku dhashay Scuba Dive Blue / Brown
Wuxuu ku dhashay Scuba Dive Blue / Brown 40.00 €
Born to Sail Cadaan / Madow
Born to Sail Cadaan / Madow 23.99 € 40.00 €
Born to Sail Buluug / Jaale / Cadaan
Born to Sail Buluug / Jaale / Cadaan 40.00 €
Born to Paddle Caddaan / Cagaaran
Born to Paddle Caddaan / Cagaaran 40.00 €
Born to Paddle Black / Gray
Born to Paddle Black / Gray 40.00 €
Born to Kitesurf Buluug iyo bunni
Born to Kitesurf Buluug iyo bunni 40.00 €
Born to Bodyboard Caddaan / Buluug / Casaan
Born to Bodyboard Caddaan / Buluug / Casaan 40.00 €
Born to Bodyboard Black / Gray
Born to Bodyboard Black / Gray 40.00 €
Born to Roll Buluug / Caddaan
Born to Roll Buluug / Caddaan 23.99 € 40.00 €
Born to Roll White / Red 40.00 €
Born to Run Madoow / Jaale / Jaale
Born to Run Madoow / Jaale / Jaale 23.99 € 40.00 €
Born to Run Cagaar / Buluug
Born to Run Cagaar / Buluug 40.00 €
Born to Run Cawlan / Buluug
Born to Run Cawlan / Buluug 40.00 €
Born to Run Caddaan / Cagaaran
Born to Run Caddaan / Cagaaran 40.00 €
Born to Run Caddaan / Casaan / Madoow
Born to Run Caddaan / Casaan / Madoow 40.00 €
Born to Skate Buluug iyo bunni
Born to Skate Buluug iyo bunni 40.00 €
Born to Skate Cawlan / Buluug
Born to Skate Cawlan / Buluug 23.99 € 40.00 €
Born to Skate Casaan iyo madow
Born to Skate Casaan iyo madow 23.99 € 40.00 €
Born to Street Ball White / Red 23.99 € 40.00 €
Born to be Free Cagaar / bunni
Born to be Free Cagaar / bunni 40.00 €
Free Soul Cadaan iyo buluug
Free Soul Cadaan iyo buluug 40.00 €
Free Soul Casaan cad iyo madow
Free Soul Casaan cad iyo madow 40.00 €
Born to be Free Casaan / Madow
Born to be Free Casaan / Madow 23.99 € 40.00 €
Born to be Free Black / Gray
Born to be Free Black / Gray 40.00 €
Born to be Free Cagaar / Buluug
Born to be Free Cagaar / Buluug 40.00 €
Born to be Free Cawlan / Buluug
Born to be Free Cawlan / Buluug 40.00 €
Born to be Free Buluug / Jaale / Cadaan
Born to be Free Buluug / Jaale / Cadaan 40.00 €
Born to be Free Madoow / Jaale / Jaale
Born to be Free Madoow / Jaale / Jaale 40.00 €
Born to be Free Buluug / Madoow
Born to be Free Buluug / Madoow 40.00 €
Born to be Free Buluug / bunni
Born to be Free Buluug / bunni 40.00 €
Born to be Free Buluug / Caddaan
Born to be Free Buluug / Caddaan 40.00 €
Born to be Free Caddaan / Buluug / Casaan
Born to be Free Caddaan / Buluug / Casaan 40.00 €
Born to be Free Caddaan / Cagaaran
Born to be Free Caddaan / Cagaaran 40.00 €
Born to be Free Caddaan / Casaan / Madoow
Born to be Free Caddaan / Casaan / Madoow 40.00 €
Born to be Free White / Red 40.00 €
Waqooyiga Madoow 26.99 € 44.95 €
Woqooyiga Buluug iyo caddaan
Woqooyiga Buluug iyo caddaan 26.99 € 44.95 €
Waqooyiga Caddaan madow iyo buluug
Waqooyiga Caddaan madow iyo buluug 44.95 €
Ciyaaraha iyo xirmooyinka xiisaha leh ee Ragga iyo Haweenka
La dabool Waa mid ka mid ah qalabka ugu badan ee uu isticmaalo cayaaraha casriga ah. Maanta, koofiyaduhu waa qeyb ka mid ah lebiska mihnado iyo ciyaartooy badan, sidaa darteed waxaa jira noocyo badan oo koofiyado ku xiran howlaha aad qabato maalin kasta. Waxay u badan tahay, tani waxay kuxirantahay inaad xirato furka gawaarida, kabanka wiilka, koofiyad yar, kabanka wiilka, koofiyad madow, koofiyad cad, dabool mesh, koofiyad casaan ah, koofiyad sawir, ama dabool isboorti. nooc kasta ama midab kasta oo aad qiyaasi karto .. Iyadoo koofiyaduhu furan yihiin adduunyo fursado aan dhammaad lahayn leh!
Sidan oo kale, dad badan, dad badan oo adduunka ah ayaa isticmaala saftay caado maalin kasta. Xaqiiqdii, daboolku waa mid ka mid ah qalabka loogu isticmaalka badan yahay adduunka, maxaa yeelay ma laha jinsi ama da 'kala sooc. Si kastaba ha noqotee, waa run in koofiyadaha isboortiga ay yihiin koofiyadaha inta badan loo isticmaalo waxtarkooda iyo raaxadooda. Xaaladdan oo kale, wax yar bay tahay haddii aad xidhato dabool ordaya, koofiyad baaskiil ama mid ka mid ah kuteellada baseball-ka ee khuraafaadka ah, sidoo kale dhib malahan haddii aad xidhato furka wiilka, koofiyadda gabadha, ama haddii aad xirato wiil, waxa muhiimka ah Waxyaabaha ayaa ah, haddii aad jeceshahay isboorti oo aad ku hogaamiso qaab nololeed firfircoon, waxaa jira noocyo badan oo koofiyado ah oo ku habboon oo ku habboon si ay u gutaan dhammaan howlahaaga maalinlaha ah.
Taariikh ahaan marka laga hadlayo, koofiyadaha baseball-ka waxaa loo meeleeyay mid ka mid ah koofiyadaha ugu caansan uguna caansan adduunka. Gaar ahaan, koofiyadaha baseball-ka waxay bilowgooda ahaayeen qiyaastii 1860-kii, markii koofiyaddii loogu yeeri jiray "Qaabka Brooklyn" ay soo ifbaxday, iyadoo guud ahaan laga faafiyay koofiyadaha isboortiga. Koofiyaddani waa awoowe koofiyadaha baseball-ka, maadaama aysan ahayn ilaa 1940-kii in qaabeynta loo qaabeeyey in la abuuro koofiyadaha casriga ee baseball ee aan maanta naqaano. Waqtigaas, muuqaalka daboolka ayaa loogu talagalay inuu ilaaliyo indhaha ciyaaryahanka, wixii markaa ka dambeeyana koofiyadaha baseball-ka waxaa loo habeeyay si kor loogu qaado tayadooda iyo in laga dhigo koofiyadan waxtar weyn u leh cayaaraha.
Waxyaabaha kale ee la qabsashada taariikhiga ah ee koofiyadu yeelatay ayaa ah daboolka xamuulka, sidoo kale loo yaqaan 'grid cap' ama gaari xamuul. Daboolka xamuulka waa nooc gaar ah oo aad u soo jiidasho leh koofiyadda, oo ay isticmaalaan ciyaartoy badan, tacabiirayaal iyo qabatimayaasha magaalooyinka ee aan ku habboonayn adduunka oo dhan, kuwaas oo ah kuwa jecel inay xirtaan koofiyado caado ah meel kasta oo ay aadaan. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan koofiyadahaani waa inay u muuqdaan inay yihiin nooc ka mid ah daboolka sawirka ama daboolka astaanta. Tani waxay ka dhigan tahay inay yihiin koofiyad ku habboon in lagu muujiyo xagga hore naqshad ama astaamo qeexaysa qofka xiran koofiyad la yiraahdo, iyadoon loo eegin inuu yahay koofiyad cas, ama koofiyad madow, koofiyad cad, ama dabool midab kale leh . Waa nooc ka mid ah daboolka mesh oo aan gebi ahaanba ka sameysnayn dharka sida uu yahay, tusaale ahaan, daboolka baseball ee caadiga ah. Xaqiiqdii, daboolka mesh ayaa ah kala duwanaanshaha ugu weyn ee gaari xamuul ah uu isbarbardhigay daboolka baseball. Xaaladdan oo kale wax yar bay ka tahay haddii ay tahay a daboolka ilmaha, hal daboolka gabadha ama a wiil koofiyad, maxaa yeelay tusaalahan koofiyadu ma laha jinsi ama da 'kala sooc midkoodna. Xaqiiqdii furka gaari xamuulku waa nooc furfuran oo noocyo badan leh oo u kala qaybsan qaybo badan: koofiyadaha isboortiga, koofiyadaha moodada iyo koofiyadaha caadiga ah, maxaa yeelay waa mid ka mid ah noocyada daboolka.
En The Indian Face Waxaad ka heli kartaa koofiyadaha xamuulka, koofiyadaha moodada, koofiyadaha orodka iyo koofiyadaha baaskiilka, iyo noocyo kale oo badan oo koofiyado ah. Haddii aad rabto inaad iibsato koofiyad shaqsiyeed, websaydhkeennu waa meesha ugu habboon ee lagu doorto kan aad jeceshahay oo aad ka iibsan kartid qadka tooska ah. Waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo sawiro ah oo wata calaamado badan oo laxiriira isboortiga aad ujecel ee aad jeceshahay sida koofiyadaha orodka iyo koofiyadaha baaskiil wadista. Waxa ugu caansan uguna macquulsan ayaa ah in mid kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee koofiyadaha loo istcimaalo hadba hawsha aan qaban doonno.
Daboolkaagu wuxuu qeexayaa qofka aad tahay iyo waliba dabeecadda aad ku dhex waddo gudaha. Gudaha The Indian Face Waxaan dooneynaa inaan abuurno noocyada ugu wanaagsan ee koofiyadaha iyo saftay isboortiga ugu fiican suuqa dhexdiisa, tusaale ahaan furka baaskiilka iyo daboolka socda, iyadoo ujeedadu tahay in macaamiisheenna la siiyo fursad ay si raaxo leh ugu iibsadaan koodhadhka internetka.
En The Indian Face sanad walba waxaan cusbooneysiineynaa aruurintayada koofiyadaha isboortiga si loo bixiyo tayada ugu fiican oo leh ikhtiyaarro kala duwan. Noocyada noo furan waxay leeyihiin suuf hore iyo gadaal mesh, iyo xirnaasho snapback ah oo la hagaajin karo. Waxaad arki doontaa in koofiyadeheenna moodada ahi ay yihiin kuwo soo jireen ah oo waxyooday 80s iyo 90-naadkii! Waxaan ku darnaa, tusaale ahaan, daboolka ordaya iyo koofiyadaha baaskiilka, iyo sidoo kale furka gaduudka iyo koofiyadda madow, anaga oo aan ka harin furka cad ama furka sawirka, laakiin ma noqon doono uun wax sawir ah, wuxuu noqon doonaa sawir wakiil cayaaraha aad ku dhalatay inaad sameyso. Si fudud ugama iibinno koofiyadaha mesh…. Koofiyadahayaga xamuulka qaada waxay gudbiyaan isboorti saafi ah oo adag oo leh qaabka ugu wanaagsan ee caadiga ah.
ADIGUNA, MAXAA CIYAARO KU DHASHAY?
Waxaan bixinaa koofiyadaha hal abuur sare leh marka la barbar dhigo inta kale ee suuqa, kaliya ma ahan tayada, raaxada iyo qaabka ay bixiyaan koofiyadeena ciyaaraha. Waxaan diirada saarnay inaan kaxuuro ruuxda xiisaha leh, kuna tusmeynayo nooc kasta oo koofiyadeena ah waxaan sawirayaa calaamad la xiriirta cayaaraha aad jeceshahay waxayna naga dhigeysaa inaan runtii xor nahay. Koofiyadeenu maahan koofiyad fudud ... koofiyadeena xiddigta, koofiyadda xamuulka, waa milicsiga ciyaartooyga xiran.
Sidaa darteed, waxaan awoodnaa inaan ku wareejino dareenka isboorti ee koofiyadaha gabdhaheena, koofiyadaha wiilka iyo koofiyadaha wiilka. Si fudud ugufiican, sida ugufiican: koofiyado shaqsi ahaan lagusameeyay isboortiga kugu dhiiri galinaya inaad ku noolaato xamaasad.
Ma waxaad tahay qof isboorti jecel oo ma jeceshahay inaad xirto koofiyado moodada leh?
Dukaankayaga qaawan ee internetka waxaad ka heli kartaa ikhtiyaarka ugu habboon oo aad ku iibsan kartaa hab raaxo leh, sahlan oo ammaan ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee daboolka xamuulka, tan daboolka isboortiga iibinta ugu fiican, waa raaxada iyo ku habboonaanta naqshadeeda, qaabkeeda iyo agabkeeda. Waxaan dhahnay in nashqadeynta koofiyadaha gawaarida xamuulka qaada ay ka soo jeedaan furka baseball-ka caadiga ah, iyadoo wax laga beddelay qaar ka dhigaya mid ka mid ah koofiyadaha ugu caansan maanta. Muuqaallada ku yaal koofiyadaha noocan ah waa qaloocan yihiin, in kasta oo ay jiraan noocyo ka mid ah koofiyadaha isboortiga ee nooca xamuulka qaada oo leh muuqaal fidsan. Sidoo kale, koofiyadaha xamuulka qaada waxay ku yimaadaan midabbo badan oo waaweyn. Moodalkan koofiyada mesh waxaa ku yaal koofiyad cas, koofiyad madow iyo koofiyad cad, dhammaantood waxay ka samaysan yihiin waxyaabo fudud.
Koofiyadahayaga xamuulka qaada waxay leeyihiin faa'iidooyin badan inta ka hartay noocyada koofiyadaha khadka tooska ah ee jira. Miyaad ku dhiiran kartaa inaad xirato dabool isboorti? The Indian Face, oo u eg moodada sanadka oo dhan? Booqo annaga koofiyadaha dukaanka internetka oo dooro daboolka gabadha, wiilka kabtiisa ama wiilka yar ee aad doorbideyso!
FARSAMADA Ciyaaraha RAGGA
ka koofiyadaha waxay ka badan yihiin uun agab isboorti. Waqtiga iyo isbeddelka moodada aan caadiga ahayn iyo moodada isboortiga, waxaa la muujiyey in dhadhanku u janjeersaday dhar isboorti oo noocyo badan leh iyo agabyo loo adeegsan karo deegaanno kala duwan, taas oo ah, magaalada iyo duurka, iyo waxqabadyada Gudaha iyo Dibadda.
La nin daboolGaar ahaan, waxay noqotay halbeegga moodada iyo mid ka mid ah qalabka ugu waxtarka badan. Dhaqamada cusub ee ciyaartooyda ayaa u horseeday inay ka fikiraan iyaga dharka si ka duwan, mudnaanta koowaad la siinayo raaxada si kor loogu qaado nolol caafimaad leh loona hagaajiyo ku dhaqanka isboortiga sida orodka. Waxay raadiyaan koofiyadaha ragga Iyagu waa farsamo iyo waxqabad sare, oo u oggolaanaya dabacsanaanta dhaqdhaqaaqyadooda, dayactirka kuleylka jirka ee alaabada neefta leh iyo raaxada, dhammaantood isla waqtigaas. Qayb ka mid ah howlgalkayaga The Indian Face, oo ah nooc isboorti iyo alaab isboorti oo casri ah, waa in la daboolo baahiyaha macaamiisheenna, oo aan ka sarreynno waxyaabaha ay ka filayaan agabyada isboortiga iyo koofiyadaha isboortiga ee aan caadiga ahayn ee kiciya xiisaha xiisaha iyo qaab-nololeedka dadka balwadda u ah kuwa aan ku habbooneyn magaalooyinka.
Dunida koofiyadu waa mid aad u ballaaran laakiin ku jirta The Indian Face waxaan xooga saarnay kor u qaadida koofiyadaha isboortiga ragga sida mid ka mid ah alaabteena calanka; Waa mid ka mid ah noocyada koofiyadaha ragga ee ku habboon in la xidho markaan ku dhiirrigelino isboortiga ugu ba'an laakiin, isla mar ahaantaana, waxaan dooneynaa inaan u muuqanno mid caadi ah oo mooddo ku leh waddanka ama magaalada.
Koofiyadaha ragga aad ayey caan u yihiin oo maanta waxtar badan ayey leeyihiin, maxaa yeelay waa nooc ka mid ah qalabka lagu ururiyo ee ay adag tahay inaad mid mid u iibsato. Koofiyadaha isboortiga ee ragga ayaa noqday mid caan ku ah moodada moodada dadka jecel koofiyadaha ragga. Xaqiiqdii, koofiyadaha dharka ragga waa mid ka mid ah qalabka isboorti ee ugu iibka badan internetka sanad walba, taas oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshahooda iyo faa iidooyinkooda waaweyn ee ay leeyihiin marka lagu dhaqmayo isboortiga. Shaki la'aan, xirashada daboolka ragga way soo hagaagi doontaa, qaasatan maalmaha qoraxda ugu cadcad, iyadoo aan loo eegin inaad xidhato koofiyad cas oo rag ah, koofiyad cad ama mid madow. Muhiimad weyn malahan hadaad xirato nin sawir gacmeed, nin mesh cap ah, nin xamuul ah ama koofiyad shaqsiyeed ... maxaa yeelay, iyada oo aan loo kala soocin, soo jeedinta khubarada markay fulinayaan howlaha banaanka waa in had iyo jeer la xidho nin fiican koofiyad aad difaacdo.
ka koofiyadaha isboortiga ragga The Indian Face Waxay la kulmaan heerarka tayada ugu fiican waxaana lagu yaqaan oo lagu qaybiyaa in ka badan 30 dal oo adduunka ah qiimahooda aan laga adkaan karin ee lacagta. Sannadba sanadka ka dambeeya, oo ah nooc ka mid ah koofiyadaha ragga, qalabka isboortiga ee caadiga ah iyo muraayadaha indhaha, waxaan ku faaneynaa inaan soo saarno moodooyin badan oo ka mid ah koofiyadaha ragga ee meheraddeenna. Dhexdeeda waxaad ka heli kartaa noocyada kala duwan ee koofiyadaha isboortiga ee ragga, oo ay ku jiraan koofiyadaha cad ee ragga, koodhka cas ee ragga, koofiyadaha madow ee ragga, daboolka mesh ragga, koofiyadaha ragga iyo koofiyadaha ragga. Waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah tan koofiyadaha ragga dukaankiisa internetka Sawirka ama shaambada aan bixinayno maahan kuwa kale, gabi ahaanba waa kala duwanaan.
Raggayaga sawirka koofiyaddeena ayaa bixiya noocyo kala duwan oo daabacaadyo isboorti oo waaweyn ah oo ku habboon baahiyaha iyo dhadhaminta ciyaartoy badan oo jaceyl u qaba adrenaline, tusaale ahaan, koofiyadaha ragga ee socda iyo koofiyadaha baaskiillada ragga, kuwaas oo ah laba ka mid ah moodooyinka koofiyadeena ugu iibinta wanaagsan dharka isboortiga . Laakiin, sida aad u aragto, koofiyadaha sawirada ragga waxay ku kala duwan yihiin dhammaan cayaaraha xiisaha leh ee aad qiyaasi karto, taasi waa sababta aan u haysanno moodallo badan oo ka mid ah koofiyadaha ragga ee laga heli karo websaydhkeenna, mid kasta oo isboorti kasta ah, iyo sidoo kale midabbo kala duwan: adiga waxaad ka heli kartaa koofi Nin casaan ah, nin dabool madow, nin dabool cad ... iyo wixii la mid ah ilaa aad ka gaarto isku darka midabka ee aad ugu jeceshahay.
Waxaa jira noocyo badan oo daboolka ragga ah, laakiin ma ogtahay inay yihiin kuwa ugu badan ee ragga loo isticmaalo adduunka?
Daboolka ragga xamuulka qaada, shaki la'aan, waa mid ka mid ah noocyada koofiyadaha ragga inta badan laga iibsado internetka maanta, sidoo kale waxaa ugu isticmaal badan kuwa jecel kuwa ugu caansan ragga. Moodooyinkan ragga kaameerada xamuulka qaada ama kuwa isboortiga ragga waa mid ka mid ah qalabka ugu faa'iidada badan ee laga heli karo suuqa, waana kuwa ugu caansan maxaa yeelay waa la qabsi ragga u xiran koofiyadda baseball-ka, taas oo ku dhowaad halyeeyo u ah isboortiga laftiisa.
Asal ahaan, koofiyadaha ragga Waxay u maleeyeen ilbaxnimooyin hore, kuwaas oo ku guuleystey inay naqshadeeyaan qaybo dhar ah oo ka caawin doona inay daboolaan oo ay ka difaacaan qorraxda. Koofiyadda baseball-ka ee ragga ayaa caan noqotay qarniyo ka hor, iyadoo ay ugu wacan tahay la qabsiga baahiyaha ganacsi ee kala duwan, gaar ahaan kuwa xamuulka qaada ee Mareykanka, waxaa la abuuray ragga ragga xamuulka qaada. Tani waxay ka dhigan tahay, mahadsanid soo saarista koofiyadda baseball-ka ee ragga loogu talagalay isboortiga, sanadihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale soo ifbaxay koofiyad caan ah oo ragga xamuulka qaada ah, taas oo maanta sidoo kale leh micno isboorti in kasta oo ay xaqiiq tahay inay tahay qaab kaftan ragga moodada ah oo la adeegsan karo iska caadi ah oo aan dhibaato lahayn.
Xaqiiqdii, qaar badan oo ka mid ah koofiyadaha ugu badan ee ragga loo adeegsado waa koofiyadaha ragga ee xamuulka. Qaabka isboortiga iyo kuwa aan caadiga aheyn, ee ku midoobay adduunyada moodada, ayaa ka dhigtay koofiyadaha isboortiga ragga xilligan inay leeyihiin meel aad u wanaagsan adduunka moodada. Haddii aad jeceshahay labada adduunba, markaa xirashada koofiyadaha isboortiga ragga ayaa ah habka ugu habboon ee lagu noqon karo moodada, maahan oo keliya haddii aad sameysid howlo isboorti laakiin sidoo kale waxaad u xirtaa si caadi ah nolol maalmeedkaaga. Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan ayaa ah in, dhamaadka maalinta, aad adigu iska dhigto qaabka naftaada, iyadoo aan loo eegayn inaad mid xidhanayso. nin koofiyad madow ama a nin cad cad, ama mid nin koofiyad cas... Muhiimadu waxay tahay inaad awood u leedahay inaad ka turjumto qaabka isboorti ee caadiga ah iyo shakhsiyaddaada qalab kasta oo aad xirato.
Ma ogtahay sida ay u egtahay daboolka ragga xamuulka qaada?
Una daboolka xamuulka nin Waa qaabka qaabka caadiga ah laakiin mesh dhabarka ku leh. Qaabka koofiyadaha xamuulka ee ragga, sidaan soo sheegnay, wuxuu ku dhashay lixdameeyadii dalka Mareykanka, markii darawalada gawaarida xamuulka qaada ay bilaabeen inay adeegsadaan. Koofiyadaha ragga xamuulka qaada waxay noqdeen, ficil ahaan, qeyb kamid ah lebiska shaqada ee gaari xamuul waqtigaas. Noocan ah daboolka mesh ee ragga ayaa ahaa astaamihiisa: shaabadda saxda ah ee xirfadle side.
Maalmaheena, the nin xamuul dabool Waxay noqotay astaamo lagu garto moodada hadda jirta oo aan kaliya buuxinaynin hawsha kaa ilaalinta qorraxda laakiin sidoo kale waxay ku siinaysaa taabasho aqoonsi gaar ah oo gaar ah. Ilaa maantadan la joogo, waxaa jira dad caan ah oo adduunka caan ka ah, moodada iyo isboortiga, oo aan ka soo muuqan daboolka ragga ee aagagga nooc kasta leh, xagaaga iyo jiilaalka labadaba, oo aysan qaban paparazzi.
Dareenka muuqaalka ballaaran ee koofiyadaha ragga waa inuu kaa ilaaliyo qorraxda. Ciyaartooy fara badan oo quudhsata iyo kuwa jecel isboortiga xad dhaafka ah sida orodyahanada, baaskiillayda ama dadka fuula waxay xirtaan koofiyadaha isboortiga ragga in badan, maxaa yeelay waxay wax badan ka caawineysaa inay naftooda ka ilaashadaan iftiinka xad-dhaafka ah iyo falaaraha qorraxda ka hor, ka dib ama inta lagu guda jiro ficilka, maadaama ay badanaa yihiin aad ugu dhaca shucaaca qoraxda. Cayaartoyda noocan ah waligood kama tagayaan guriga iyagoon haysan daboolka ragga ee ragga ama koofiyada baaskiilka ragga, sida xaaladdu noqon karto. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad haysato dhowr waxyaalood noocyada koofiyadaha ragga: si looga hortago kanaga performance nooc kasta oo ka mid ah cayaaraha xiisaha leh ee aad ku horumarto, sidaas darteedna aad iskaga ilaaliso dib-u-dhacyada suurtagalka ah ee qorraxdu keento
Xaaladdan oo kale, wax yar baa ka soo kordha haddii aad xidhato daboolka ragga, maddaarka baseball-ka ee ragga, ama daboolka sawirka ragga…. Si kastaba ha noqotee, maxaa noo nacas ah, haddii ay leeyihiin sawir qabow way fiicantahay! Xaqiiqduna waxay tahay in koofiyadaha xagga hore ay leeyihiin meel ku habboon oo lagu daro sawir, astaan, naqshad, midab iyo balastarro u oggolaanaya kuwa xidha koofiyadaha ragga ee xamuulka inay si gaar ah ugu qaabeeyaan qaabkooda. Waa run in daboolka ragga uu buuxiyo waxqabad bilic leh iyo shaqo ilaalin ah, laakiin, intaas ka sokow, koofiyadaha sawirada ragga ayaa aad u fiican in la siiyo ciyaartooyda suurtagalnimada inay muujiyaan xiisaha ay u qabaan isboortiga, oo leh jajabyo leh naqshado qabow sida kuwa leh sawirka ragga. koofiyadaha aad ka hesho websaydhkayaga ... waxaad dareemi doontaa inaad xiraneyso koofiyad rag gaar ah sida ku xusan dareenkaaga dareenkaasuna wuxuu noqon doonaa mid gaar ah.
La daboolka isboortiga ragga in aad ka hesho websaydhkayagu wuxuu kuu ilaalin doonaa moodada hab gaar ah, adiga oo kaa ilaalinaya falaaraha cadceedda ee ugu daran. Waxa jira daraasado badan oo ina xusuusinaya sida shucaaca qorraxda ugu dhacayaa maqaarkayaga iyo aragtideena. Tanina waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ah inaan marwalba xirno koofiyadaha ragga. Waa qalab isboorti oo kala duwan, waxtar leh oo moodle ah oo waliba noqda habka ugu fiican ee lagu muujiyo dhadhankeena shakhsi ahaaneed.Hoora ragga qaabka koofiyad aad ugu jeceshahay dukaanka koofiyadaha internetka ee ragga, oo muuji qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada adoo abuuraya xiisahaaga soo socda!
SAFARADA CIYAARAHA DUMARKA
La naag dabacsan Waxay noqotay mid ka mid ah qalabka moodada ugu faa iidada badan sanadihii la soo dhaafay sababo badan awgood. Kaliya maahan sababta oo ah waxay ka caawineysaa gabdhaha "maalmaha timaha xun", laakiin maxaa yeelay si dhab ah koofiyadaha haweenka waxay cadeeyeen inay lagama maarmaan tahay in la daryeelo nafteena marka aan bannaanka u baxayno, gaar ahaan marka aan ku jimicsano bannaanka iyo qorraxda falaadhaha.
ka koofiyadaha isboortiga ee haweenka Xaqiiqdii, waa qaar ka mid ah qalabka isboortiga ee caadiga ah ee hadda la iibsado inta badan sanad kasta internetka. Waan ognahay in noocyada kala duwan ee koofiyadaha haweenku ay yihiin kaabis aad u faa'iido badan, laakiin shaki la'aan, koofiyadaha isboortiga ee haweenku sidoo kale waxay noqdeen agab moodis ah oo aan la dafiri karin, gaar ahaan isbeddellada isboorti ee caadiga ah iyo athleisure. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah koofiyadaha ugu caansan ee haweenka ayaa ah koofiyadaha baaskiilka ee haweenka iyo koofiyadaha orodka ee haweenka, kuwaas oo ah ciyaaro caan ka ah Spain iyo adduunka oo dhan, oo had iyo jeer la fuliyo iyadoo laga ilaalinayo iftiinka ultraviolet. Xaaladdan oo kale, wax yar baa ka soo kordha haddii aad xidhato koofiyad haween madow ah, koofiyad cas oo haween ah, koofiyad cad oo haween ah, koofiyad mesh haween ah, koofiyad baseball oo haween ah ama koofiyad dumar oo xamuul ah woman's. Muhiimadu waa inaad awood u leedahay inaad la qabsato mid ka mid ah noocyada noocan ah koofiyadda dumarka maalinba maalinta ka dambaysa, oo aad ka tagto adigoo ka ilaalinaya falaaraha qorraxda.
Faa'iidadan waxaa lagu siin karaa adiga, tusaale ahaan, adigoo haweenka koofiyadaha gawaarida. Si aad ugu gudubto macnaha guud, qaabka koofiyadaha dumarka u dhaamiyaan ama koofiyadaha mesh ee dumarka waa qaab dib u dhac ah maxaa yeelay asalka daboolka gaari xamuulku wuxuu dib ugu soo laabtay 60-meeyadii. Waqtigaas, beeraleydii waagaas waxay ka faa'iideysteen koofiyadaha gaadiidleyda badeecada siiya oo ay ku xayeysiiyaan. Halkaas, qaybtaan hore waxaa loo isticmaalay in lagu rakibo sawirro iyo balastarro ku darista macluumaadka koofiyadda isboortiga haweenka, taabasho ka duwan, mid gaar ah oo shaqsi ahaaneed iyadoo loo eegayo dhadhanka cayaaraha, xiisahaaga iyo qaab nololeedkaaga caadiga ah ee isboortiga.
Ma ogtahay sida ay u egtahay xijaabka gawaarida xamuulka ee haweenka?
Koofiyadaha gawaarida xamuulka ee haweenka waxay leeyihiin shey la mid ah caag xumbo ah oo xagga hore ah, badiyaa leh balastar sidata naqshad shaqsiyeed, sida ku jirta koofiyadaha isboortiga ee dumarka ee aan ku bixinno dukaankeenna qaawan ee internetka. Koofiyadaha wax lagu sawiro ee haweenka waa nooc ka mid ah koofiyadaha haweenka ee loogu talagalay astaan ​​gaar ah ama sawir karti u leh inaad ku tusto adduunka intiisa kale qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada iyada oo aan loo baahnayn in wax badan laga sheego. Tusaale ahaan, haddii sawirkan ku yaal daboolka isboortigaaga ee haweenka uu muujinayo gabar ordaya, markaa daboolkaaga ayaa noqon doona mid ku habboon oo lagu muujiyo adduunka aad u jeceshahay cayaartan. Xirashada daboolka ordaya ee haweenka ama kan baaskiil wadista haweenka, taas oo ku xidhan dareenkaaga, waxay adduunka u muujin doontaa inaad tahay qof isboorti jecel, shaki kuma jiri doono inay ka mid tahay qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada.
La daboolka xamuulka haweeney Waa, shaki la'aan, mid ka mid ah dharka ugu caansan adduunka. Waxay leedahay dhar u ekeysiinaya shabaq leh xajin la isku hagaajin karo, taas oo u oggolaanaysa dhabarka madaxa inay hawo ka baxdo iyadoo laga fogaanayo isku darsiga dhididka, iyadoo la siinayo hawo aad u wanaagsan oo aad u fiican. Taasi waa sababta, munaasabado badan, koofiyadaha gawaarida ee dumarka sidoo kale loo yaqaan koofiyadaha mesh ee haweenka, iyadoon loo eegin midabka ay yihiin. Marar badan waxaad gashan kartaa koofiyadaha gaduudan ee haweenka, koofiyadaha madow ee haweenka ama koofiyadaha cad ee haweenka iyo, iyadoon loo eegin midabka ay yeelan karaan, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa loo kala saari doonaa inuu yahay koofiyad haween ah haddii ay leedahay astaamaha aan kor ku soo xusnay. Sifooyinka koofiyadleyda dumarka, tusaale ahaan, aad ayey uga duwan yihiin astaamaha koofiyadda baseball-ka ee haweenka. Daboolka baseball-ka ee haweenku wuxuu ka samaysan yahay gebi ahaanba maro tolmo ah oo aan lahayn mesh, sidaa darteed waa inaan lagu qaldin koofiyadaha mesh ee haweenka. Si kastaba ha noqotee, koofiyadaha baseball-ka ee haweenku sidoo kale waxay noqon karaan midabyo kala duwan: waxay noqon kartaa koofiyad dumar casaan ah, ama koofiyad dumar oo madow ah, ama koofiyad cad oo haween ah sidoo kalena waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin koofiyad baseball ee haweenka.
Laakiin, dhammaan noocyada koofiyadaha haweenka ee jira, koofiyadaha isboortiga ee haweenku waa kuwa ugu firfircoon, raaxada leh, adkaysi u leh iyo dharka moodada ah ee aad dooran karto. Taasi waa sababta aan ugu maleyneyno inay caqli badan tahay in la iibsado koofiyadaha isboortiga ee dumarka marka aad wax ka iibsaneyso internetka.
Gawaarida xamuulka ee haweenka ayaa kudhaca The Indian Face waa kuwo gaar ah oo aan laga adkaan karin!
La naag dabool waxay bixisay moodada magaalooyinka iyo dharka isboortiga mid ka mid ah qalabka ugu waxtarka badan halkaas dhowr iyo toban sano. Anaga gudaheena The Indian FaceWaxaan jecel nahay ka mid noqoshada dhaqdhaqaaqa isboortiga aan caadiga aheyn oo aan awood u siin karno macaamiisheenna fursado badan oo koofiyadaha moodada haweenka ah, oo leh midabbo iyo qaabab kala duwan. Waxaan haynaa in kabadan 15 sano oo khibrad ah abuurida koofiyadaha orodka ee haweenka, koofiyadaha baaskiil ee dumarka iyo koofiyadaha isboortiga ee haweenka kuwaas oo kiciya ficillo badan iyo ciyaaro xiiso badan
ka koofiyadaha moodada haweenka in aan ku bixinno dukaankeenna ayaa ku habboon in la isticmaalo bannaan laakiin sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh gudaha. Xaqiiqdii, waa wax aad loo jecel yahay maanta in la xidho koofiyadaha isboortiga ee haweenka, ha ahaato ama yaanay ahayn inaad iska ilaaliso qorraxda. Wax macno ah kuma lahan qaabka ama midabka ay leeyihiin: waxay si fiican u noqon kartaa koofiyad dumar madow, koofiyad cad oo haween ah, koofiyad casaan haweeney, koofiyad sawir haween ah, daboolka mesh ee dumarka sida kuwa gawaarida xamuulka. Waxay sidoo kale u noqon kartaa koofiyad gaar ah oo loogu talagalay haweenka leh qaab isboorti, koofiyad orod loogu talagalay haweenka ama koofiyad baaskiil loogu tala galay dumarka haddii aad ku tababarto kuwan ama ciyaaro kale ... Waxaad ku dhejisaa qaabka hal-abuurkaaga!
Noocyada kala duwan ee koofiyadaha haweenku wax badan ayey ka sheegaan shakhsiyaddaada iyo qaabkaaga, sababtaas awgeed, waxay caan ku noqdeen sannadihii la soo dhaafay adduunka oo dhan. Daboolka guduudan ee haweeneyda dhabarka ama dhinaceeda waxay kaa dhigi kartaa mid madadaalo leh, halka koofiyada madow ee haweeneyda ama koofiyadda cad ee haweeneyda hore ay muujinayaan biseyl iyo adkeysi. Ma jiro dhar ama lebbis kaamil ah, laakiin hubaal mid ka mid ah faa'iidooyinka xirashada koofiyadaha moodada haweenka ayaa ah in la qabsashadoodu ay aad ugu habboon tahay qaabab kala duwan oo aan caadi ahayn, magaalo, isboorti iyo xitaa qaabab dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah Adiga naag dabacsan waxay kuu sheegi doontaa wax adiga xiiso kuu leh oo kaa dhigi doonta mid qurux badan isla markaa!